TODO: ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ဟပြောဆိုပါ Linux မှ
"အားလုံး" အင်္ဂလိပ်စကားစုမှဆင်းသက်လာသောစကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်သည်။ "ပွင့်လင်းစကားပြောပွင့်လင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်" စပိန်လိုဘာလဲ "ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါ"။ ဒါကအခြေခံအားဖြင့်ကတိကဝတ်ပြုထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုစုစည်းပေးတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုရည်ညွှန်းတယ် «Código Abierto».
ထို့ကြောင့်၎င်းကိုဖော်ပြနိုင်သည် "အားလုံး" como ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ပွင့်လင်းတဲ့အုပ်စု စီမံကိန်းများနှင့်အစီအစဉ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အလေ့အကျင့်များ၊ ကိရိယာများနှင့်အခြားနည်းလမ်းများ၌ပူးပေါင်းလိုသူ «Código Abierto» အောင်မြင်သောနှင့်ထိရောက်သော။
ထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်, ၏အားသာချက်ယူ «Software Libre y Código Abierto» သူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွင်းမှာတီထွင်ဖန်တီးမှုတွေ၊ သူတို့ရဲ့မွေးရာပါအတွေးအခေါ်၊ အခြေခံမူနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေဟာသူတို့ရဲ့အသင်း ၀ င်အားလုံးအချင်းချင်းကိုအသုံးချနိုင်အောင်၊ စီမံကိန်းထောင်ပေါင်းများစွာကိုကူညီပံ့ပိုးထိန်းသိမ်းထားသည်သေးငယ်ပြီးကြီးတယ်။
1 အားလုံး - ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါ
1.1 TODO အဖွဲ့ဝင်များ
ဒီအုပ်စု (သို့) လှုပ်ရှားမှု "အားလုံး" အုပ်စု၏စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းခြင်းထိုကဲ့သို့သောဆော့ဖ်ဝဲလ်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးမြင့်မားမှုနှင့်ထုတ်လုပ်ရမည့်ဗားရှင်းများ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်နည်းစနစ်များကိုသေချာစေခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ကာ developer အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူလိုအပ်သောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသေချာ နှင့်စီမံကိန်းအားလုံးဆီသို့လိုအပ်သောပံ့ပိုးမှုများထိရောက်သောနှင့်မျှတတဲ့လမ်းအတွက်။
အဖွဲ့ဝင်များသည်ဤစိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန်သန္နိare္ဌာန်ချထားကြသည်။ ထိုသို့အောင်မြင်ရန် သူတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေပါ၊ အကောင်းဆုံးအလုပ်အလေ့အကျင့်များမွေးထုတ်ပါမလိုအပ်သောပြproblemsနာများသို့မဟုတ်အခက်အခဲများကိုရှောင်ရှားရန်၎င်းတို့သည်ဘုံကိရိယာများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
ထို့ကြောင့်အချုပ်အားဖြင့်၎င်းသည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနိုင်သည် အဓိကရည်ရွယ်ချက် ဒီအုပ်စုရဲ့ ပရိုဂရမ်များလည်ပတ်နေသောကုမ္ပဏီများကိုအတူတကွစုစည်းပါ «Código Abierto» တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး သူတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေရန်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မျှဝေထားသောဗဟုသုတတိုးတက်စေရန်ကူညီခြင်း။
အဖွဲ့ဝင်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်စဉ်းစားသောကုမ္ပဏီများကိုကိုယ်စားပြုလေ့ရှိသည် «Código Abierto» တစ်ဦးအဖြစ် သင်၏စီးပွားရေးပုံစံအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖြည့်စွက်မှု။ ပြီးတော့ဒီအုပ်စုရဲ့သဘောသဘာဝကြောင့်၊ သူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြောင်းပုံမှန်အားဖြင့်ဖလှယ်လေ့ရှိတဲ့အထိခိုက်မခံတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ် «Código Abierto»၎င်းအဖွဲ့ ၀ င်များသည်လဲလှယ်မှုအတွက်သီးသန့်စာပို့စာရင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့် ၄ င်းတို့၏ကုမ္ပဏီကုမ္မဏီတစ်ခု၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဌာနချုပ်တွင်လူတစ် ဦး ချင်းစီသုံးလတစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံလေ့ရှိသည်။
မှတ်စု: ၏တရားဝင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် အုပ်စုတစ်စု "အားလုံး"ကဖြစ်ရမည် Linux ဖောင်ဒေးရှင်းမှ.
"အားလုံး" အထူးတစ် ဦး အဖြစ်ရည်ရွယ်သည် ဖိုရမ် ဒါကြောင့်ပရိုဂရမ်ဒါရိုက်တာများ «Código Abierto» အဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီများနှင့်တွေ့ဆုံရန် ထို့အပြင်သူတို့သည်အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအတွက်လှုပ်ရှားမှုလမ်းပြမြေပုံတစ်ခုတည်ထောင်ရန်လေ့လာနေကြသည်။
ရွေးချယ်ထားသောစံသတ်မှတ်ချက်များသို့မဟုတ်အရည်အသွေးများနှင့်ကိုက်ညီသောအားလုံး၏ Open Source စီမံကိန်းများ၏လမ်းညွှန်တစ်ခုဖန်တီးပါ။
တိုတိုပြောရရင် "အားလုံး" အများသုံးအကျိုးစီးပွားရှိသောကုမ္ပဏီအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်သည် «Código Abierto»သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆော့ဖ်ဝဲတိုးတက်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းပြtheနာကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီရန်ဘုံရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည် «Código Abierto».
မှတ်စု: ဤအဖွဲ့အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည် အုပ်စု၏တရားဝင် site ကို "အားလုံး".
မင်းမျှော်လင့်ပါတယ် "သေးငယ်ပေမယ့်အသုံးဝင်သောပို့စ်" ၏ဤစိတ်ဝင်စားဖို့ခေါင်းစဉ်အပေါ် «Grupo TODO»အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာကုမ္ပဏီများအားစုစည်းရန်ဖြစ်သည် «Código Abierto»တစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်များအတွက်အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ applications များနှင့်ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့မှကြီးသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အတော်ကြာ » အားလုံး - ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါ
အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ Open source ။
ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ဟာအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲလို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တယ်။ စစ်မှန်သောအခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုထောက်ခံသူများသည် "open source" ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုအဓိပ္ပာယ်တူမဟုတ်သောကြောင့်အသုံးမပြုပါ။ https://maslinux.es/wp-content/uploads/2019/12/sl.jpg
Guillermo မင်္ဂလာပါ! မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သေချာတာပေါ့၊ သေချာအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့မတူဘဲတခြားအရာတွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီးသဘောတူထားတဲ့ open source မဟုတ်ဘဲဘာမှမလုပ်ပဲလောင်းကစားတာလုပ်ကြတယ်။ ကျနော့်အမြင်အရ Open Source သည်စီးပွားဖြစ်စီးပွားရေးကို ဦး တည်သည့်ကုမ္ပဏီများအတွက်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲသည်စီးပွားရေးမဟုတ်သောအုပ်စုများသို့မဟုတ်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်ပိုမိုအကျိုးရှိသည်။